GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana - Ny Tany Masina any Vietnam
Dimampolo taona lasa izay, sabatra tsy fahita firy ary tsy mahazatra no hita tao am-pasana iray tany Chine. Na dia salama aza mihoatra ny 2,000 taona, ny sabatra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Goujian, tsy nanana soritra fanitsiana iray akory. Nisintona rà ilay lelan-tsabatra rehefa nisy arkeology nisedra ny rantsan-tànany tamin'ny sisiny, toa tsy nisy fiantraikany tamin'ny fandehan'ny fotoana. Ankoatr'ity kalitao hafahafa ity, ny asa-tànana dia nopetahany takalony feno amin'ny sabatra natao hatry ny ela. Raha oharina amin'ny harem-panjakana any Shina ankehitriny, ny sabatra dia malaza ho an'ny vahoaka sinoa toy ny mpanjaka Arthur's Excalibur any Andrefana.
In 1965, nanao valin'ny fanadihadiana ny arkeology Faritany Hubei, 7 km monja (4 kilaometatra) avy amin'ny sisan'i Jinan, renivohitr'i fanjakana Chu fahiny, rehefa nahita fasana dimampolo dimampolo izy ireo. Nandritra ny fangalarana ny fasana, ny mpikaroka dia nizara ny sabatry Goujian miaraka amina artifika hafa 2,000.
Nahitana ny Goujian
Ilay sabatra Goujian dia maranitra ankehitriny satria maherin'ny roa arivo taona lasa izay (Loharano: Wikimedia Commons)
Raha ny filazan'ny mpitarika ny ekipa arkeolojika tompon'andraikitra amin'ny fampandrenesana azy dia hita tao am-pasana, tao anaty vata hazo manakaiky ny rivotra eo akaikin'ny zoro. Taitra ny ekipa rehefa nesorina tao anaty boaty ny sabatra varahina miaro tsara miaraka amin'ny scabbard. Rehefa tsy voavaha io dia nambara fa tsy voatsahatra ny fofona na dia nalevina tao anaty fepetra mangentina ho an'ny roa tapitrisa. Ny fitsapana nataon'ny arkeolojia dia nampiseho fa afaka nanapaka tsipika vita tamin'ny roapolo roa ilay tsipika.
The Sabatra avy amin'i Goujian dia iray amin'ireo fantatra voalohany Jian sabatra, sabatra lambo manana lelan-droa vita nandritra ny farany 2,500 taona any Sina. Ny sabatra Jian dia isan'ny karazana sabatra voalohany indrindra ao Shina ary mifandray akaiky amin'ny angano sinoa. Amin'ny folklore sinoa, dia fantatra amin'ny hoe "Ilay Tompon'ny fitaovam-piadiana”Ary heverina ho iray amin'ireo fitaovam-piadiana lehibe efatra, miaraka amin'ny tehina, lefona ary ilay sabera.
Sword of Goujian, Musei Provincial Hubei (Loharano: Wikimedia Commons)
Fohy fohy raha oharina amin'ireo sombin-tantara mitovy amin'izany, ny Sabatra Gouijan dia sabatra varahina miaraka amin'ny fifantohana avo varahina, ka mahatonga azy ho pliant kokoa ary tsy hitera-doza. Ny sisiny dia vita amin'ny firapotsy, mahatonga azy ireo ho mafy kokoa sy afaka mitazona sisiny maranitra kokoa. Misy ihany koa ny kely vy, mitarika ary solifara amin'ny sabatra, ary ny fikarohana dia nanisy habetsahan'ny solifara avo vera sulfide, izay manome ny sabany ny kalitaony tsy azo atokisana. Ny firakotra mainty rhombika dia manarona ny andaniny roa amin'ny lelan-tsolika ary ny volomaso manga ary ny turquoise dia mifatotra amin'ny faritry ny sabatra. Ny fihazonan'ny sabatra dia fehezin'ny landy raha ny pommel kosa dia misy faribolana concentric 11. Mandrefy ny sabatra 55.7 cm ny halavany (21.9 in), anisan'izany ny 8.4 sm (3.3 in) nitantana hilt, ary manana a 4.6 sm (1.8 in) sela matevina. izany milanja 875 grama (30.9)oz.
Azo jerena ao anaty fehin-tsabatra ny turquoise (Loharano: Wikimedia Commons)
Fanapahana ny soratra
Amin'ny lafiny iray amin'ny lela, tsanganana roa andalana hita miaraka litera valo, akaikin'ny hilt, izay amin'ny script sinoa taloha. Ilay script, fantatra amin'ny anarana hoe "鸟 虫 文" (ara-bakiteny “'vorona ary kankana endri-tsoratra ") dia aseho amin'ny alàlan'ny haingon-trano mahavariana amin'ny fitohizan'ny famaritana, ary ny fiovaovan'ny zhuan tena sarotra vakiana izany. Ny fanadihadiana voalohany dia namaky ny enina tamin'ireo litera valo ireo. Novakin'izy ireo ny, “越 王” (Mpanjakan'i Yue) sy “自 作用 剑” (“nanao ity sabatra ity (Ny) fampiasana manokana"). Ny toetra roa sisa tavela dia mety ho anaran 'ny mpanjaka.
Tamin'ny nahaterahany 510 BC amin'ny fatiantoka eo am-pelatanan'i Chu in 334 BC, mpanjaka sivy no nanapaka yue, anisan'izany ny Goujian, Lu Cheng, Bu Shou, ary Zhu Gou, ankoatry ny hafa. Ny maha-izy ny mpanjaka izay nanana sabatra dia niteraka adihevitra teo amin'ireo mpikaroka sy ny manampahaizana sinoa. Rehefa afaka roa volana mahery, dia nametraka marimaritra iraisana ireo manam-pahaizana fa ilay tany am-boalohany Owner ny sabatra dia Goujian (496 - 465 Talohan'i Kristy), manao ny sabatra manodidina 2,500 taona.
Goujian emperora malaza teo amin'ny tantara sinoa izay nanjaka tamin'ny Fanjakana Yue nandritra ny Spring ary Vanim-potoana fararano (771 - 476 Talohan'i Kristy). Fotoana nanamarihana korontana tao anatin'ny Zhou Dynasty ary maka ny anarany avy ao amin 'ny Spring ary Farara fararano, izay nahatonga an'ity vanim-potoana ity. The Spring ary Vanim-potoana fararano nalaza noho ny dia nataon'ny miaramila; ireo fifandonana ireo dia nanjary tonga lafatra ny fitaovam-piadiana ka nahatonga azy ireo ho mahatohitra sy mahafaty tokoa, ary nandany taona maro vao nivadika sy naharitra nandritra ny taonjato maro. Ny tantaran'i Goujian ary fuchai, Mpanjakan'ny Wu fanjakana, malaza manerana an'i Shina ny fifanandramana amin'ny hegemony. Na dia Goujian's fanjakana resin 'ny Fanjakan'i Wu, Goujian hitarika ny tafiny amin'ny fandresena 10 taona aty aoriana.
Toerana tsy manam-paharoa
Ankoatry ny lanjany manan-tantara, maro ny manam-pahaizana no nanontany tena hoe ahoana no mety hijanonan'ity sabatra ity tsy hiaina afa-maina amin'ny tontolo mando, fa tsy mihoatra ny 2,000 taona, ary ny fomba nanamboarana ny haingo mahafinaritra dia voatsatsoaka amin'ny sabatra. The sabatry Goujian dia mbola mangidy ankehitriny toa ny tamin'ny namoronana azy voalohany, ary tsy misy faritra makiazy izay hita ao amin'ny vatana ankehitriny.
Ny mpikaroka dia namakafaka ireo zaridaina varahina taloha tamin'ny fanantenana ny fomba hahitana ny teknolojia ampiasaina hamoronana sabatra. Hitan'izy ireo fa ny sabatra dia mahatohitra ny fihoaram-pefy vokatry ny solifation ambonin'ny valan-tsabatra. Io, miaraka amin'ny scabbard tery amin'ny rivotra, dia namela ny sabatra angano hita tao anaty toe-piainana madio toy izany.
Ireo fitsapana koa dia mampiseho fa ireo mpanefy sabatra an'ny Wu ary Faritra Yue any Atsimon'i Shina mandritra ny Spring ary Vanim-potoana fararano Nahatratra metalyurgie ambaratonga be dia be izy ireo ka nahafahan'izy ireo nametraka ny tady ahosotra vita amin'ny harafotina, ary nanampy azy ireo ho velona amin'ny taona tsy misy loto.
Tapaka ny sabatra
In 1994, ny Sabatra avy amin'i Goujian nindramina mba hisehoana ao Singapore. Raha ny mpiasa iray nanala ny sabatra teo am-pelatanany tamin'ny famaranana ny fampirantiana, dia nandondona ilay fitaovam-piadiana izy, ka saika nahatratra 7mm. Niteraka korontana tany Chine ny fahavoazana ary tsy navela na oviana na oviana eo ivelan'ny firenena io. Voatahiry ao amin'ny Museum Museum Hubei.
+ “Sabatra avy amin'i Goujian. " HistoriaRex.com. http://historiarex.com/e/en/89-sword-of-goujian.
+ “Sabatra sabatra: sabatra avy amin'ny Goujian. " Kolontsaina Shina.
+ Andrei, Mihai. "Ny sabatr'i Goujian - tsy namboarina taorian'ny 2700 taona. ” ZME Science. 21 Oktobra 2011.
+ Kalamidas, Thanos. "Ny Blade izay nandresy Millennia. " Gbtimes.com. 17 aprily 2013.
1 Bryan Hill: Nahazo mari-pahaizana bakalorea i Bryan avy amin'ny Oniversiten'i Suffolk ary nahazo mari-pahaizana momba ny firotsahana an-tsitrapo amin'ny tranombakoka ary niara-niasa tamin'ny vondrona ankizy tao amin'ny Museum of Science sy National Park Service. Nandeha nitety an'i Etazonia sy tany ivelany koa izy. Rehefa avy nandalo semesera roa tany ivelany tamin'ny alàlan'ny University of Mississippi dia nitsidika toerana rava sy piramida marobe tany Mexico izy izay nananganany fankasitrahana ireo kolontsaina sy sivilizasiôna taloha. Raha mbola tany izy dia naka fiteny faharoa tamin'ny teny espaniola ihany koa. Miaraka amin'ny maha nahazo diplaoma ny tantara dia mpikambana ao amin'ny Phi Alpha Theta National Honors Society i Bryan. Amin'ny fotoam-pialanany dia faly i Bryan miasa, mamaky ary liana amin'ny fanafody sy ny sakafo mahavelona.
◊ Loharano: Fiainana taloha, fananganana indray ny tantaran'ny The Humanity: ancient-origins.net
(Visited 7,960 fotoana, 5 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ohatra vitsivitsy amin'ny script NÔM
CHỮ NÔM na ny sora-tanana taloha Vietnam ary ny fanomezana taloha tamin'ny literatiora Vietnam - Fizarana 1 →
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (4,759)